သစ်မှောင်ခို၊ မူးယစ်ဆေး၊ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုနှင့် လူမှောင်ခိုလုပ်ပြီး ဘယ်သူတွေ စီးပွားရ? - Yangon Media Group
တရုတ်နိုင်ငံကို သစ်မှောင်ခိုလုပ်ငန်း က ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကနေ ၂ဝ၁၈ ပွင့်လင်းရာသီအထိ ရှမ်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ ကချင် ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ အနှံ့အပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ယင်းသစ်မှောင်ခိုတွေဟာ မူးယစ် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ လူကုန်ကူးမှုတွေ၊ ကျောက် စိမ်းမှောင်ခိုတင်ပို့မှုတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ လာဘ် ပေးလာဘ်ယူမှုတွေနဲ့အတူ ဖြစ်ပေါ်နေပါ တယ်။ တရားမဝင်ကုန်စည် ဖြန့်ဖြူးရာနေရာ လည်း ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဘယ် ပစ္စည်း လိုချင်သလဲ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ဖုန်းအမျိုးမျိုး၊ စကားပြောစက်အမျိုးမျိုး၊ အရက် အမျိုးမျိုး၊ လူသုံးကုန်၊ စားကုန် အမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ရက်ကို အစီး ၅ဝ အဝင်အထွက်မှာ အပါ သယ်လာကြတာဖြစ်တယ်။ သစ်ကို ဆေးပြား နဲ့ လဲလို့လည်း ရတယ်။ သစ်က တစ်တန် ယွမ်နှစ်ထောင်တန်ရင် ဆေးပြား ၁ဝဝ က ယွမ်သုံးသောင်း တရုတ်ဘက်မှာ ဈေးပေါက် တယ်။ သည်တော့ တရုတ်နိုင်ငံက အဝင်ကုန်၊ အသွားကုန်ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်စားလို့မရသမျှ နယ်မြေမငြိမ်းချမ်းတဲ့နယ် မြေမှာ အကုန်လုပ်စားလို့ရတော့ မြိုးမြိုးမြက် မြက်ရှိလှတဲ့ မှောင်ခိုလမ်းကို လျှောက်နေဆဲ စီးပွားရေးသမားတွေ များတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် သစ်တောဌာနက ဝိုင်း မော်မြို့နယ် ဆဒုံးဒေသ၊ ဧရာဝတီမြစ်အ နောက်ဘက်ကမ်း ဗန်းမော်နဲ့ မိုးမောက်မြို့ နယ်တို့၊ မန်စီမြို့နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အစပ်တွေမှာ သစ်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းရှိနေတာ ကြားသိကြောင်း ပြောတယ်။ သင်္ကြန်မှာ သစ် အတော်များများ ထုတ်မယ် သတင်းရတယ် ဆိုတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်တို့ကြား ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်အတွင်း သစ်မှောင်ခိုမှုအကြောင်းပြုကာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ် ပွားနေပြီး သစ်တန်ပေါင်း ရာနဲ့ချီ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ တယ်။ ယင်းသစ်တွေက ကသာခရိုင်၊ ကချင် ပြည်နယ် ရွှေကူမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း မိုးမိတ်၊ မိုးမောက်ဘက်မှ ရောက်ရှိလာတဲ့ ကျွန်းနဲ့ တမလန်းသစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကသစ်တွေကို တရုတ် နိုင်ငံ နောင်တောင်းမြို့၊ ရွှေလီမြို့၊ ကျယ်လန်း ရပ်ကွက်မှာ စုပုံကာ ပရိဘောဂနဲ့ ကုန်ကြမ်း တွေ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး အဖိုးတန်ကျွန်းသစ် ကို ပြည်တွင်းမြို့ကြီးတွေအထိ ပို့ဆောင်နေ ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ခက်အောင်က ကချင်ပြည်နယ် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ပထမနေ့ မတ် ၂ဝ ရက်က ‘အစိုးရသစ်ကာလအတွင်း ကျွန်း ၆၇၄ ဒသမ ၁၉၇၄ တန်၊ သစ်မာ ၅၆ ဒသမ ၇၉၅၁ တန်၊ အခြား ၉၁၂ ဒသမ ၂၇၅၂ တန်၊ စုစုပေါင်း ၉၈၅၂ ဒသမ ၂၆၇၇ တန် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရတယ်။ ဖမ်းမိတာက နည်းနည်း ဂိတ်ကြေးပေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံရောက် တာ များများဖြစ်နေတော့ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အကြီး အကျယ်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရေ ဝေရေလဲတောများ ပျောက်ဆုံးလို့ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ မြစ်ရေကြီးမှု၊ နွေရာသီမြစ် ကြောင်း ပြောင်းလဲမှု၊ ရေနည်းဖြစ်စဉ်များ အဆက်မပြတ် ဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ နဲ့ နောက်ဆက်တွဲညီလာခံတွေ ကျင်းပနေ ပေမယ့် အားလုံးအပစ်ရပ်(NCA)လက်မှတ် မထိုးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေ ဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နဲ့ လားဟူဒီမိုကရက်အဖွဲ့(LDU)တို့အားလုံး အပစ်ရပ် NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ လက် ရှိအပစ်ရပ် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့ ၁ဝ ဖွဲ့ ရှိပြီဖြစ်တယ်။ ၂၁ရာစု ပင်လုံ ပထမအစည်း အဝေးကို နေပြည်တော်မှာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သြ ဂုတ် ၃ဝ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ညီလာခံ ဒုတိယနေ့မှာ မိုင်းလား အဖွဲ့ (NDAA)က ယင်းတို့တင်မယ့်စာတမ်းကို လက်မှတ်ထိုးပေးအပ်ခဲ့ပြီး ပြန်သွားတယ်။ မိုင်းလားအဖွဲ့ ပြန်လာတာကို တစ်ဆင့်နှိမ့် အဆက်ဆံခံရလို့ ပြန်လာတာမှန်ကြောင်း ဖိတ်ကြားမခံရတဲ့ ကိုးကန့်(MNDAA)၊ ရခိုင် (AA)နဲ့ တအာင်း(TNLA)တို့က ကြိုဆိုခဲ့ကြ တယ်။
၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေးကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေ ၂၄ ရက်မှ ၂၉ရက်အထိ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပရာ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)က လေ့လာသူအဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရ လို့ မတက်ရောက်ခဲ့ဘူး။ ‘ဝ’ဦးဆောင်တဲ့ ပြည် ထောင်စု နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ကော် မတီ(FPNNC)အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ ‘ဝ’ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(UWSA)၊ ကချင် (KIA)၊ ကိုးကန့်(MNDAA)၊ တအာင်း(TNLA)၊ မိုင်းလားအဖွဲ့(NDAA)၊ ရှမ်းပြည်တိုး တက်ရေးပါတီ(SSPP/SSA)၊ ရခိုင်(AA)တို့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုအရ တက် ရောက်ခဲ့ပြီး ကြေညာချက်စာတမ်း လက်မှတ် ထိုးပေးအပ်ကာ မေ ၂၇ရက်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်း နေ့ ညနေပိုင်းမှာ နေပြည်တော်မှ တရုတ် နိုင်ငံ ကူမင်းအထိ ပြန်သွားပြီး ယင်းမှ ဒေသ အသီးသီး ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ပထမနေ့မှာ ဆွေး နွေးတဲ့ ‘ပြည်ထောင်စုမှခွဲမထွက်ရနှင့် တစ်ခု တည်းသော တပ်မတော်’အဆိုမှာ သဘော ထားတူညီချက်မရလို့ ကျန်အချက်အလက် များ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ၃၇ ချက် အတည်ပြုလက် မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးပြီး ဆက်လုပ်ဖို့ရှိတဲ့ UPDJC ကိုလည်း မလုပ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၂၁ ရာစု တတိယအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်မှာလုပ်ဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့ပေမယ့် မွန်လူမျိုးစုနဲ့ ရှမ်းလူမျိုးစု ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ မလုပ်ရသေးလို့ နောက် ဆုတ်ပေးခဲ့တယ်။ လက်နက်ကိုင်တွေ ထောက် ပြနေတာက ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေး မပါဝင်ဘူး။ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် ဖြစ်လာရင် လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အရေးနဲ့ သယံဇာတခွဲ ဝေရယူရေးကိစ္စမှာ မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အပစ်ရပ် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီး အဖွဲ့မှာတင် ၁ဝ ဖွဲ့ရှိရာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA)၊ ပအိုဝ့်အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ(KNCA)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်ဖွဲ့ (DKBA)၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား များဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)နဲ့ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) ရှစ်ဖွဲ့နဲ့ မွန် ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက် အဖွဲ့(LDU) ပေါင်း ၁ဝဖွဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေးမှာ နိုင်ငံခြားအကူအညီရ ယူလို့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံပြုလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တရား ဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာ ရှိသင့်ပြီပဲဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နှစ်စဉ် သစ် တောဧရိယာ ခြောက်သိန်းဧက ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ အချိန်မှာ စစ်ကိုင်းနဲ့ တနင်္သာရီ အချို့အရပ် တွေ ထုတ်လုပ်ခွင့်မှတစ်ပါး အားလုံးရပ်ဆိုင်း ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့ ကချင်ပြည် နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ သစ် မှောင်ခိုထုတ်နေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဧက ၅၇ ဒသမ ၉၇ ရာ ခိုင်နှုန်းရှိရာမှာ ၂ဝ၁၅ မှာ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာ ခိုင်နှုန်းသာ ရှိတော့တယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းလို့ တရားဥပဒေ မစိုးမိုး လို့ ပျောက်ရှကုန်တယ်။ သစ်တောကရတဲ့ဝင် ငွေလည်း အခြားနိုင်ငံ သစ်တောဝင်ငွေထက် လျော့နည်းသွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အာဏာစက် သက်ရောက်တဲ့ ဒေသတွေမှာ သစ် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် တရုတ် နိုင်ငံကို တစ်နာရီ သစ်ခုနစ်တန် ရောက်နေတာ၊ သစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက ငွေကြေးနင့် နေအောင်ပေးပြီး တရုတ်နိုင်ငံအရောက် ပို့ ဆောင်နေကြတာပဲ ဖြစ်တယ်။ သည်လိုပဲ ကျောက်စိမ်းခိုးတူးကာ ထွက်ရှိလာတဲ့ကျောက် စိမ်းအရိုင်းတုံးအတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံကို မှောင်ခို တင်ပို့နေကြတယ်။ အကယ်လို့ အစိုးရနဲ့ ကချင် KIA သာ ဖက်ဒရယ်အရေး ဆွေးနွေး ကြတော့မယ်ဆိုရင် သယံဇာတ ခွဲဝေရေးအတွက် သိပ်မစဉ်းစားရမယ့် အပြောင်ရှင်းနည်း နဲ့ ထုတ်လုပ်နေသလား အံ့သြရလောက်တယ်။
လက်နက်ကိုင်တို့ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ြ<ွကဆေးပြား စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်ကြတယ်။ လက်နက်ကိုင်တွေက ကျေးရွာရှိ ဘိန်းတောင်သူတွေကို အခကြေးငွေပေး ပြီး ဘိန်းစိုက်ခိုင်းတယ်။ ဘိန်းရာသီမှာ ဘိန်း စေ့ခြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်တွေ ပေးသွင်းပြီးချိန် မှာ တစ်နှစ်စာ စားသောက်ဖို့ဖူလုံနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဘိန်းစိုက်ခင်း များ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့တဲ့အခါမှ ယင်းစိုက်ခင်းတွေ တပ်နဲ့ရဲတွေက သွားရောက် ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ ရှင်းလင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
နယ်မြေ မစိုးမိုးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေက လူ တွေ စစ်ရှောင်စခန်းတွေရှိရာ မြို့ပေါ်ထွက် ပြေးခိုလှုံလာတယ်။ အချို့ အလုပ်အကိုင်သစ်၊ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ မရနိုင်တော့ လူကုန် ကူးတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ထဲ ဝင်သွားပြီ။ မိန်းကလေး ဆိုရင် တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံကြရ တယ်။ ယောက်ျားဆိုရင် ကျွန်သာသာ ပရိ ဘောဂစက်ရုံ၊ လယ်ကွင်းတွေမှာ ထမင်းစား ကျွန်ခံ လုပ်ခဲ့ကြရတယ်။ ယနေ့ လူကုန်ကူးမှု ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ ကျော်ဟာ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံကြရ ပြီး အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ တရုတ်ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံကြရတာပဲဖြစ်တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းတော့ လူမှောင်ခိုပွဲစားတွေ အလိုက်သင့် လုပ်စားလို့ အဆင်ပြေနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဆိုရရင် သစ်မှောင်ခို၊ မူးယစ်မှောင်ခို၊ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခို၊ လူမှောင်ခိုတို့ဖြစ်ပွားရ တာ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ ဖြစ်ရတာပါပဲ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့် က ငါးကြီးကြီး ဖမ်းပြပြီး ကြော်လိုက်ဖို့ အကြံ ပေးရာ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည် နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ ထောက်ပြစရာဖြစ်လာပါတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ စစ်ဖြစ်နေတာ ရေရှည်မှာ သယံဇာတစစ်ပွဲ ပုံစံ ဖြစ်နေတယ်။ ၂၁ရာစုညီလာခံတွေ တက် ရောက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မဝင်စားတဲ့အဖွဲ့ က ကုလသမဂ္ဂနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပါ သက်သေ ပြုခိုင်းတော့ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းဖို့ရှိလာပါ့ မလား စိုးရိမ်စရာပါပဲ။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း ဖဒိုမြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးဖွင့်ပွဲ တ?
ဒီလစ်ကို လီဗာပူးအသင်း ခေါ်ယူသင့်ကြောင်း ဗန်ဒစ် အကြံပြု